Jurgen Klopp Oo Shaqadii Lagu Yaqaanay Bilaabay - Ismaila Sarr, Jamal Lewis Iyo AFAR Ciyaartoy Oo Kooxihii Heerka 2aad U Degay Ah Oo Uu Bartilmaameedsanayo - Gool24.Net
Jurgen Klopp Oo Shaqadii Lagu Yaqaanay Bilaabay – Ismaila Sarr, Jamal Lewis Iyo AFAR Ciyaartoy Oo Kooxihii Heerka 2aad U Degay Ah Oo Uu Bartilmaameedsanayo
August 4, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Liverpool ayaa bilowday halgal ay si fiican ugaga adeeganayso suuqa iibka ciyaartoyga, waxaanay dib u raacaysaa raadka uu Jurgen Klopp xariifka ku yahay ee sannadihii ugu dambeeyey samaynaysay, gaar ahaanna ay ku bartilmaameedsanaysay naadiyada ka dhaca Premier League.
Liverpool ayaa weerartay Hull City iyo Stoke City markii ay dib uga dhaceen heerka labaad, waxaanay qiimo jaban kaga soo qaadatay Andy Robertson iyo Xherdan Shaqiri, waxaanu Jurgen Klopp qorshaynayaa in sidii oo kale uu sannadkanna sameeyo.
Xiddig kale oo muhiim ah ayaa ay Liverpool kasoo heshay kooxihii heerka labaad u deggay, waana halbowlaha khadka dhexe ee Gini Wijanldum oo ay kasoo iibsadeen Newcastle United markii ay heerka labaad u dhacday, isla markaana ay ku dhibaatoonaysay inay xajisato ciyaartoygeeda waaweyn.
Sannadkan waxa horyaalka ka dhacay Bournemouth, Watford iyo Norwich City, waxaanay Reds ka dhex arkaysaa fursad ay kaga soo qaadan karto afar ciyaartoy oo qaarkood ay lacago badan kaga bixi lahaayeen haddii ay isku dayi lahayd inay lasoo wareegto intii ay naadiyadani Premier League ka ciyaarayeen.
Afar ciyaartoy oo ka tirsan saddexdan kooxood ayaa uu Klopp doonayaa inuu kusoo kordhiyo safkiisa, kuwaas oo la ogyahay in aanu mid kastaaba doonayn inuu kasii ciyaaro heerka ay kooxahoodu u dageen ee Championshipka.
Laacibiintan ayaa waxa ugu horreeya weeraryahanka da’da yar ee Ismaila Sarr oo afka hore uga ciyaara Watford, isla markaana wacdaro ka dhigay horyaalka xili ciyaareedkan.
Laacibkan ayaa dhaliyey laba ka mid ah goolashii ay Watford ka dhalisay Liverpool xili ciyaareedkii tegay, kuwaas oo sabab u noqday inay ka joogsadaan rikoodhkii guul-darro la’aanta Arsenal.
22 jirkan reer Senegal oo shan gool dhaliyey afar kalena caawiye ka noqday kulamadii horyaalka ee kooxdiisa ayaa waxa la rumaysan yahay inuu doonayo inuu Anfield kala ciyaaro Sadio Mane oo ay isku waddan yihiin.
Xiddiga kale ee Klopp uu calaamadsaday ayaa ah difaaca kooxda Norwich City ee Jamal Lewis, kaas oo uu doonayo inuu u isticmaalo beddelka Andy Robertson oo aan loo hayn ciyaartoy kale oo soo labeeya.
Trent-Alexander-Arnold oo tababare Klopp uu da’yartiisa uga helay beddel fiican oo ah Neco Williams oo xili ciyaareedkan kulamo dhawr ah nasiyey, waxa uu Jamal Lewis kaaliye uga dhigi doonaa Robertson haddii uu saxeexiisa ku guuleysto.
Emi Buendia oo Norwich City toddoba caawimood u sameeyey xili ciyaareedkan iyo Lloyd Kelly oo Bournemouth difaaca uga ciyaara ayaa uu iyagana Jurgen Klopp doonayaa inuu keeno Liverpool xagaagan.